Warkii.com-News and information about Somalia Xisbigii doortay Madaxweyne Farmaajo oo arin cusub ay lasoo daristay & cabsi laga qabo in…. - Warkii.com-News and information about Somalia
Xisbigii doortay Madaxweyne Farmaajo oo arin cusub ay lasoo daristay & cabsi laga qabo in….
Madaxweynaha DF Soomaaliya ayaa masuul ka ah niyad jabka soo wajahay xisbigii Daljir ee ka dambeeyay inuu kusoo baxo doorashadii ka dhacday dalka 8-dii bishii hore, sidaas waxaa sheegay war kasoo baxay xisbigaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa si lama filaan ah doorashadaas ugu soo baxay kadib markii uu garab ka helay kooxdii isbadal doonka ee uu hor boodayay Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, laakiin kadib doorashadaas xisbigaas ayaa looga baxay balan awood qeybsi ah oo ay la galeen madaxweynaha.
Qaar kamid ah saraakiisha xisbiga ayaa sheegay iney niyad jab kala kulmeen madaxweyne Farmaajo, taasna ay keentay in awoodii siyaasadeed ee xisbigaas ay hoos udhacdo.
“Madaxweynaha waxaa uu balan qaad usameeyay xubno kamid ah xisbiga Daljir sida Axmed Macalin fiqi iyo Xasan Macalin, laakiin taas ma aysan dhicin” sidaas waxaa yiri xildhibaan kamid ah xisbiga Daljir.
Xubnahan ayaa la filayay in midkood uu noqdo Ra’isul wasaare hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa si lama filaan ah xilkaas ugu magacaabay RW Xasan Cali Kheyre.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya iney adag tahay in xubnahaan ay xilal ka helaan xukumada isbadalka ah ee soo socota.
Marar badan ayuu madaxweyne Farmaajo isku dayay inuu qanciyo xildhibaanada, laakiin wararka ay heshay Shabakadda Wararka Warkii.com ayaa sheegaya in arintaas lagu guul dareystay.
Xisbiga Daljir oo ay ku jiraan siyaasiyiin badan oo caan ka ah Soomaaliya ayaa haatan udagaalamaya sidii uu uhanan lahaa awood siyaasadeed oo uu isugu diyaariyo doorashooyinka soo socda.